ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: မျက်ရည်..............
ရလိုက်တဲ့ မင်းရဲ့ အတွေ့အထိက
မာယာများတဲ့ မျက်ရည် ရယ် .
ကြေကွဲခြင်းကနေ အဖျားခံလာတဲ့ မျက်ရည်တွေက ဘယ်တော့မဆို ခံစားဖို့ ခက်နေမှာပဲ ထင်ပါရဲ့ညီရာ..။
ှုကဗျာလေးက ရလိုက်တဲ့ ခံစားချက် ငါ့ကိုပါ ကူစက်တယ် ငမျိုး . . . ခံစားလိုက်ရတယ်း(
စာသားတွေနည်းသလောက် အဓိပ္ပါယ်များစွာ ပြည့်နှက် နေသော..ကဗျာလေးပါပဲ ကိုမျိုး...
"This, too, will pass" OK!! ;))
မျက်ရည်ကျပြီးတဲ့ မျက်လုံးက ပိုလှတယ်တဲ့
ပြောချင်တာက စိတ်ညစ်စရာတွေ လာပြီးရင် ပျော်စရာတွေလည်း လာပါလိမ့်မယ်
ကိုညီ..... ဟုတ်ပါ့ဗျာ ရင်းနှီးရတာတွေများတယ်နော့် သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခုပဲ ။
ကိုနိုင်.... ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကို
ကိုရှိန်း... ရင်ဘတ်ချင်းတူလို့နေမယ်ဗျ ။
နေ၀သန်... ကြောင်မငိုဘူးေ၇ကူးတတ်တယ်း)
အိန်ဂျယ်... ကျေးဇူး ညီမလေး
မိုးခါး... ဖိုက်တင် အီးယားးး မုသွင်းလိုက်တယ် ။
မချော... ဟုတ်ပါ့ အစ်မရေ့ မငိုဖူးသောမျက်လုံးများ မလှပါတဲ့ မှန်တယ်နော့် ။